Dell G5 15-5590 Gaming Laptop Black (i5-9th Gen)-3 ~ ICT.com.mm
HomeDell G5 15-5590 Gaming Laptop Black (i5-9th Gen)-3
Dell G5 15-5590 Gaming Laptop Black (i5-9th Gen)-3
Item Code: NB0020192 Intel® Core™ i5-9300H Processor 15.6″ FHD (1920 x 1080) IPS 300-nits Display 8GB DDR4 2666MHz (4Gx2) (2 Slot) NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 128GB M.2 PCle NVMe SSD... [Learn more]
Brand: DellFilter by: 15.6", 1TB HDD + 128GB SSD, 8GB RAM, Black, Gaming Laptops, Intel Core i5-9th Gen, KMD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, USD, Windows 10 Home
Item Code: NB0020192
15.6″ FHD (1920 x 1080) IPS 300-nits Display
8GB DDR4 2666MHz (4Gx2) (2 Slot)
128GB M.2 PCle NVMe SSD (Boot) + 1TB 5400 rpm 2.5″ SATA
4 Cell Battery, 60WHr (Integrated)
ဒီ Dell G5 15-5590 Gaming Laptop က Dell ရဲ့ နာမည်ကျော် G5 Gaming စီးရီးထဲက ဖြစ်ပြီးသင့်တော်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ အရည်အသွေးမြင့် အကြမ်းခံ Gaming Laptop တစ်လုံးအဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် PC ဂိမ်းအမြင့်တွေကို သွက်သွက်လက်လက်ကစားနိုင်ဖို့ i5-9300H Processor ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်က ပုံမှန် Gaming Laptop တွေရဲ့ 15.6” အရွယ်အစားအတိုင်း ဖြစ်ပြီး Full HD ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်လင်တောက်ပတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ IPS နည်းပညာပါဝင်တဲ့ 300-nits Display ကိုတပ်ဆင်ထားတာဖြစ်လို့ သာမန် Full HD တွေထက် ပိုမိုစိုပြည်တဲ့မျက်နှာပြင်ကာလာနဲ့ဂိမ်းကစားနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲတွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းကစားနိုင်ဖို့ RAM 8GB (2666MHz, DDR4) ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ RAM Slot နှစ်ခုမှာ တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် RAM အရမ်းမြင့်ဖို့လိုတဲ့ Game တွေကစားချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပြေ Upgrade ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Gaming Laptop ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအတွက် NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဂရပ်ဖစ်ကတ်က နောက်ဆုံးပေါ် PC ဂိမ်းတွေကို ကစားတဲ့အခါမှာ GeForce GTX 950 ထက် နှစ်ဆပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး GTX 1050 ထက် 70% စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုသာလွန်တဲ့ ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Data Storage အတွက်မြန်ဆန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိဖို့၊ ဈေးနှုန်းသက်သာဖို့နဲ့ဒေတာတွေအများကြီးသိမ်းဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး 128GB SSD နဲ့ 1TB HDD တို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီး Hybrid Drive အနေနဲ့ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ OS အတွက် Windows 10 Home ကိုတပါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် Cracked Version တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့ Window Update Error တွေအတွက် စိတ်ညစ်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ဘတ္ထရီအတွက်4Cell, 60 Whr Battery အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းကအစ ကွဲထွက်နေတဲ့ Gaming Lapotp ကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Gaming Laptop ကို သွားလေရာမှာ အဆင်ပြေပြေသယ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက် Gaming Backpack တစ်လုံးကို လက်ဆောင်ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Gaming Laptop နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုဖို့ အလန်းစား Gaming Mouse တစ်လုံးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Available with Windows 10 Home or Windows 10 Pro: Gaming is better than ever on Windows 10, DirectX 12, and streaming your gameplay.
See what your game is capable of with powerhouse, NVIDIA® GeForce® RTX 20-series graphics and up to 8GB GDDR6 dedicated memory. Fierce, flicker-free visuals come alive with optional 144Hz and G-sync displays.
Super-level security:Get started with an fingerprint reader (FPR) that enables Windows Hello.Power up: Quick-charge your system with the 60Whr battery. Sleek setup:The G5 15 helps make sure your battle station stays polished by putting critical ports in the back of the system, so cords and distractions stay out of the way.